WAXA UGU XIISAHA BADAN OO FAA'IIDO LEH OO KU SAABSAN GUURKA DIGAAGGA KUCHINSKY JUBILEE - BEERAHA DIGAAGA
Qaar badan ayaa ku hawlan digaagga taranta, sababtoo ah tani ma aha ganacsi khibrad leh, laakiin natiijada ayaa waxtar u leh yaraynta kharashyada miisaaniyadda gaarka ah.
Isla mar ahaantaana, beeralayda daaqa ee casriga ah ayaa durbadiiba barteen cashar ah in waxtarka ganacsigaani uu ku xirnaan doono xooggaaga quudinta iyo daryeelka shimbiraha, laakiin sidoo kale xulashada saxda ah ee taranka.
Waxa ugu muhiimsan waa ujeedada digaagga taranta: hilibka, ukunta ama caanaha. haddii ay dhacdo in baahidaada ay hoos u dhacdo saddexdan qaybood, waxaan kugula talineynaa in aad fiirisid feejignaanta, taas oo dhammaan qodobkan soo socda loo kala qeybin doono - digaagada caanaha ee Kuchinsky.
Waxaan isku dayi doonaa inaan kuugu dedejinno dhamaan sifooyinka ugu muhiimsan ee tarankooda, faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka laf ahaantooda.
Waa maxay farqiga u dhaxeeya digaagga jubilee ee Kuchinsky iyo waxa faa'iidooyinkeeda: sharaxaadda of breed
Tani waa la yaqaan muddo dheer, iyo qalinka beeraha daaqsiyo badan oo badan, iyo sidoo kale dadka tuulada, mid ka mid ah la kulmi karaa Beelaha Kubees ee jubilee, kuwaas oo aan si gaar ah u helay, dhab ahaantii, si dabiici ah.
Sidoo kale, laf ahaanta lafteeda ayaa loo heley natiijada ka soo wareegidda koox wadaag ah oo ah digaagga ugu fiican ee waxtarka leh. Gaar ahaan, Australorp, Rhode Island, Striped Plymouthrock iyo Bury Leggorn ayaa la soo gooyay.
Ulajeedada iskudubka noocan oo kale ah waxay ahayd in la helo jilicsan aad u wanaagsan oo leh ujeedo guud, taas oo ah, ma aha oo kaliya taranka taranka, laakiin sidoo kale midka ukunta. Natiijadu waxay ahayd mid aad u wanaagsan, sababtoo ah caleemo xumi ma heli karto mid caan ah oo aan weli caan ahayn ilaa maanta.
Si aad si fiican u fahamto nooca caanaha ee su'aasha, ugu horreyntii, tixgelin sifooyinka jinsiyada loo isticmaalo marka la gudbo:
Australorp. Caanaha Universal - waxay keenaan tiro badan oo ukun ah (laga bilaabo 180 ilaa 200 ukum sanadkiiba hal lakab) waxayna bixisaa qadar badan oo hilib ah.
Miisaanka shakhsiyaadka ragga ayaa ku kala duwanaan kara 2.7 ilaa 4 kiilo garaam, halka dumarku yar yihiin - ugu badnaan 3 kiilo. Taageerada dabbaaldegga ah ee Kuchinsky dalladaha Australorp wuxuu noqday aasaaska hiddaha ee jimicsigan.
Rhode Island. Marka laga soo tago universality, tani waxay sidoo kale waa sidee geneerka ah ee aan qabyo ahayn ee daryeelka iyo beerista, iyo sidoo kale dulqaad. Mahadsanid iyada, caanaha aan xiiseyneyno waxay heleen tayada cajiibka ah sida miyir qabka iyo iswaafajinta wanaagsan.
Miisaanka lakabka iyo digaagaha jinsiga Rhode Island waa ku dhowaad isku midka ah ee kor lagu sharaxay.
Plymouth Brock Striped wuxuu loola jeedaa nuucyada hilibka, inkasta oo wax soo saarka ukunku uu aad u qanacsan yahay - ilaa 160 ukumo sanadkiiba. Xayawaanka waxaa inta badan loo isticmaalaa sidii wax loogu talagalay beerista noocyo kale oo digaag ah, maxaa yeelay sidoo kale maaha mid aan macquul aheyn oo ku jirta maaddada oo waxay bixisaa tiro badan oo ah hilibka iyo ukunta.
Brown Leggorn. Caanaha ayaa sidoo kale waxaa loo yaqaan magaca Talyaaniga Chicken Husk. Wareegtada la yaqaan muddo dheer, lagu qiimeeyo wax soo saarkooda sare ee dhigaya ukumaha waaweyn.
Miisaan xooggan oo shimbir haween ah ayaa gaareysa ugu badnaan 2.5 kg, halka ragga ay tahay 3.7. La qabsashada waddanka waa mid hooseeya.
Tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan mudnaanta guurka Kuchinsky ee curia
Caanaha tani waa mid aan loo baahneyn oo kaliya maareeyayaasha guryaha, laakiin sidoo kale kuwa warshadaha kuwaas oo ku dhufanaya shimbirtaas oo aad u ballaaran.
Sababta baahida loo qabo digaagani ma aha oo kaliya awoodda ay u leedahay inay soo saaraan tiro badan oo hilib ah, laakiin sidoo kale inay helaan tiro badan oo ukun ah.
Marka la isbarbardhigo dhadhanka hilibka iyo maraqaanka Kuchi jubilee waxay la jilcaan badeecooyinka kale ee digaagga (tusaale ahaan, isla Rhode Island ama Plymutrovka), waxay ka sarreeyaan dhammaan tilmaamayaasha iyo shuruudaha.
Xitaa hilibka broiler kuma tartami karaan jilicsanaanta hilibka ee taranka la tilmaamay ee digaagga. Sidoo kale, hilibka waxa ku jira qadar badan oo borotiin ah, waa mid aad u casiir leh oo udgoon.
Waa mid aad u fudud oo fudud si loo dacaayado digaagga, taas oo loogu talagalay heerka heerkulka sare ee 82-94%. First of all, tani waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa jinsiga wanaagsan ee daacad ah.
Sidaa darteed, xitaa toban ragga ah waxay ku filnaan doonaan hal lab ah si ay ukumaha u dhisto. Marka labaad, si aad u sameysid digaagga sida aad u fudud iyo guriga, meelaynta ukunta guriga hoostiisa hoostiisa, taas oo ah faa'iido muhiim ah.
Waa arrin aad u muhiim ah oo qiimaheedu gaaro dareen gaar ah - digaagga Cunto-sannadeedka Kuchinski koraan si dhakhso ah. Gaar ahaan, horay 20 usbuuc oo da 'yar, duufaanku wuxuu miisaankeedu noqon karaa 2.4 kiilogaraam, iyo ilaa 52 toddobaad oo uu helayo ugu yaraan 1 kilo miisaan.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo sababaha keena dhimashada broilers.
Digaagga si dabiici ah ayay u yaryihiin, inkastoo si gaar ah loola socdo - badanaa culeyska toddobaadka 20aad waa 2 kiilo, iyo isbuuca 52-aad - 2.7.
Tani waxay sabab u tahay qaabdhismeedka gaarka ah ee shimbiraha ee shimbiraha la tilmaamay, taas oo awood u leh in ay si fiican u hirgeliso cuntada cuntada la siiyey oo ay ugu badnaan isticmaalaan nafaqooyinka ka soo baxa.
Biologists iyo physiologists ayaa ogaaday in xitaa digaagga 4-usbuuc in ay u badan tahay in ay la midoobaan macdanta sida nitrogen, potassium, fosfooraska iyo dufanka (taas oo ka timaada quudinta), xitaa haddii aan isbarbardhigo Broilers iyo Plymouths.
Dheef-shiid kiimikaad ah oo ka mid ah digaagga ayaa u oggolaanaya inay dastuur adag ka sameeyaan horraantii, si ay u helaan miisaan nololeed.
Dabcan, waa nooc ka mid ah waxa loola jeedaa xabagta, ma la yaabi karno tirada ukumaha la saaray digaagga. Gaar ahaan, hal sanadka ugu horreeya ee wax soo saarka shakhsiga ah, laga bilaabo 180 ilaa 240 ukumo ayaa la heli karaa, taas oo ah tiro aan caadi ahayn.
Iyada oo dhan tan, dhigaya ukumaha horey u bilowga da'da 5.5-6 bilood. Celceliska miisaanka ukunta waa qiyaastii 58 garaam, midabkuna wuxuu yahay midab khafiif ah, oo leh casaan yar oo casaan leh.
Suurtagal ma tahay in uu Kuchi jubilee guriga ku kaco?
Wax-soo-saarka sare, taas oo aan ahayn oo keliya xaddiga hilibka iyo ukumaha, laakiin sidoo kale in reproducibility of taranka. Tani waxay ka dhigan tahay in chicks ay naftooda u muujiyaan hooyooyin aad u daryeela, waa dhif iyo naadir in digaaggu ukumo ukun ka hor intaan digaagga ka muuqan.
Xitaa waxaa dhici karta in xitaa sidan oo kale ah, sida duufka xad dhaafka ah ee hen, taas oo ka timaadda iyada oo aan dooneynin inuu ka tago buulka ka leh ukunta inta lagu jiro dhalada (sidaas darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la kaxeeyo iyo gaar ahaan u quudiyo).
Sidaa darteed, haddii ukumaha hoos yimaada ay fiicnaadeen, markaa waxay ku dhawaad ​​100% siin doonaan jiil cusub. Isla mar ahaantaana, qiyaastii kala bar dhammaan digaagga ayaa noqda chicks, mid kasta oo ka mid ah oo ku fadhiisan kara 30 digaag.
Noocyada haadiga ah ee lagu baddalay by taranta caan ah, waa dhif iyo naadir in la helo noocyadaas noqon lahaa adkaysi u noqoto mustaqbalka, gaar ahaan marka lagu hayo guriga.
Laakiin caleemaha ah ee digaagga Kuchinsky waa dhab la mid ah oo wuxuu loola jeedaa noocan oo kale ah, taas oo u oggolaanaysa in ay jilaan this tan muddo sanado ah, helitaanka wax soo saarka sare.
Awoodda dhirta la tilmaamay ee la tilmaamay ayaa aad u sarreeysa, taasoo markale xaqiijinaysa sida ay ugu haboon tahay beerashada iyo taranka guriga. Gaar ahaan, tani waxay wax ku kordhineysaa poduh, taas oo ah difaaca ugu fiican ee looga hortago dhaxan.
Xitaa dhibaatada noocan oo kale ah sida jilicsan ee cayayaanka ee xilliga qaboobaha ee sanadka ma aha mid laga cabsado jubilee Kuchinsky, maxaa yeelay waxay leeyihiin qiyaas aad u yar. Marka lagu daro cimilada qaboobaha, astaamaha iyo sifooyinka waxay leeyihiin saameyn togan oo ku saabsan dulqaadka kulaylka.
Tayada ugu dambeysa ayaa sidoo kale lagu soo bandhigaa taxanaha ilaalinta xayawaanka yaryar, taas oo u dhiganta 96-98%. Tani waxay ka dhigan tahay in digaagga yar oo aad u dhif ah ay u dhinta ka geystaan ​​gardarrada ama taxaddar la'aanta digaagga, iyo sidoo kale, waxay aad u dhif u yihiin inay qaadaan fayrasyada.
La qabsiga heer sare ee xaaladaha cimilada iyo xaaladaha kala duwan. Xataa iyada oo la socoto warshadaha warshadaha ee tani (taas oo ah, content ee digaagga ee unugyada), wax soo saar iyo bacrimin ma hoos u.
On cilladaha ee taranka iyo sida loo saameynayo
Dhab ahaantii, noocaani waxa uu ku shaqeeyaa wax aan jirin, waxna ma ahayn in la gooyey habka taranka sida adag. Hase ahaatee, waxaa jira waxyaalo badan oo ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay kuwaas oo u qalma in ay si gaar ah u fiiriyaan.
Sidaas oo leh xoog xoog badan curia ee taranka la tilmaamay, gaar ahaan sanadka labaad ee noloshooda, halkii miisaanka nool, waxay bilaabaan inay helaan baruurta. Natiijo ahaan, hoos u dhac ama xitaa awood u lahaanshaha ukumaha.
Xaaladdan oo kale, xitaa laga helo kiiskan, ukumaha ayaa inta badan aan la sharraxin. Waxaa intaa dheer, shimbiraha ayaa si weyn u wiiqi kara nidaamka difaaca, waxay inta badan bilaabaan inay jirrado iyo si dhab ah.
Si looga hortago tan, way ka fiicantahay in la badbaadiyo cuntada marka loo eego si ay u dhaafaan tirada. Beeralayda digaaga ayaa ku doodaya in ay aad u wanaagsan tahay haddii digaagga ay ka tagaan nuujiyayaasha yar yar ee gaajada, taas oo gacan ka geysan doonta muuqaalkooda caafimaad.
Noocyada muuqaalka iyo kala duwanaanshaha galmada Kuwan oo ah digaagga ku-meel-gaarka ah
Waxaa suurtagal ah in la kala saaro caajisyada digaagga inta udhaxeysa dhalashada, iyo jinsiga waxaa lagu dhigi karaa itimaalka ah 90%.
Inta badan lebbiska ayaa ka duwan midabka ka soo kicinta ilaa madow-madow, iyo sidoo kale qaababka cirridka ee dhabarka iyo meel madow oo dabiiciga ah madaxa. Laakiin halkan waa in cockerels baalashu waa caddayn, haddii aan isbarbar dhigo midabka jirka oo dhan.
Sidoo kale, balastu waxay noqon kartaa mid gebi ahaanba la iftiimay ama meel wanaagsan oo dhexda ku jirta. Digaagga ma yeelan karaan dhibco dhan, ama waxaa laga yaabaa inay ku yaalliin dhinacyada baalashooda.
Waayeelka midab-boodbood Tani dabeecada this wuu isbedelayaa: waxay noqotaa dahab-dahabka leh barar caan ah oo jilicsan. Xuddunta qalinka waxay leedahay hooskii iftiin, sidaas darteed boogta digaagu ma laha khatarta madow.
Kabriidayaashu waxay leeyihiin boomaato casaan ah, taas oo ka dhigaysa mid aad u dhalaalaya oo soo jiidasho leh. Ku guuleysiga guusha xilliga qaangaarka ah, baaluqyada dul saaran iyo dhabarka hoose waxay noqdaan kuwo dhalaalaya oo dahab ah. Laakiin laabta iyo dabada, waxay u badashaa madow.
Jilbaha madow ayaa lagu arki karaa baalalka, oo leh dabeecad madow oo ka mid ah noocyada this. Intaa waxaa dheer, dhammaan agagaarkooda waa mid aad u jilicsan oo ballaadhan, ma furo sida noocyo kale oo badan oo kala duwan oo digaagga.
Waa inaad fiiro gaar ah siisaa qaababka jirka iyo qaababka dhismaha Digaagga guuritaanka Kuchinski:
Madaxda malawadka waa mid yar, dhexdhexaad ah.
Guluubku waa mid adag oo adag, oo hurdi ah oo leh jilbaha brown.
Dhegaha dhegaha ayaa si cad u muuqda, maadaama ay yihiin midab casaan.
Comb waa mid yar, caleen.
Xabaduhu waa dusha sare iyo qoto dheer, dhabarkuna waa mid ballaaran oo toosan.
Torso ee shimbiraha waa muddo dheer, taas oo sidoo kale ka dhigeysa dhabarka dheer.
Baalashu waxay aad ugu dhow yihiin jirka digaaga.
Caanaha waxaa lagu gartaa lugaha hoose oo leh midab jaale ah.
Wax yar oo ku saabsan dabeecadda curia ee lagu qeexay jilicsanaanta
Shimbirahaasi waa kuwo ficil ahaan ah Ha abuurin wax dhibaato ah. Haddii ay tahay mid waqti go'an oo hudheello ka samaysan hoyga, ka dibna ukumaha oo dhan waa ay ku jiri doonaan, oo aan kala firdhin dhammaan dhuxulada suurtogalka ah ama xitaa hareeraha dayrka. Sidoo kale, digaagga marnaba ha u seexanin hareeraha, adigoo doorbidaya inay xajiyaan. Sidaa daraadeed, ma deynin labada hudheel ama baalkooda u gaar ah.
Xitaa digaagga yaryar si dhakhso ah ayey u muujiyaan waxqabad iyo iswaafajinta wanaagsan. Gaar ahaan, waxay si deg deg ah u isticmaalaan qofka oo joojiyaan in uu ka baqo muuqaalkiisa, ku dhowaad isla markiiba bartaa xiriirka u dhexeeya muuqaalkiisa iyo muuqaalka cuntada cusub. Dhibaatooyinka lama diiwaangeliyo xitaa marka loo wareejiyo qol kale, waxay la qabsadaan isla markiiba.
Maxay yihiin sifooyinka ka saarista tuubbooyinka: wadaagaan waaya-aragnimada iyo qarsoodiga
Waxaa ugu wanaagsan in la jilciyo this dabiici ah, oo leh caawinta chicks. Sida kor ku xusan, qaabkani wuxuu ku dhawaad ​​100% natiijada bixinayaa. Ha iloobin marmar mar keliya si aad ugaga celiso digaaga ukunta uguna quudiya.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad go'aansato markii ugu horeysay si ay u bilaabaan sii kordhaya ma aha oo kaliya digaagga Kuchinsky kaliya, laakiin sidoo kale bilaabi beerashada digaagga markii ugu horeysay, ka dibna dabcan waa ka fiican in la doorto hab habubub. Inkasta oo, dabcan, way fududahay in la iibsado chicks ee suuqa, laakiin badanaa waa kharash badan.
Marka la ilaaliyo oo kaliya chicks chicks, waxaa aad u muhiim ah in lagu hayo heerkulka sare, qiyaastii heerka 30ºS, si tartiib tartiib ah hoos u 20 °. Tani waxay fududeyneysaa isdhexgalinta adduunka ka baxsan, ka hortagga horumarinta cudurrada.
Maxaa la siinayaa digaagga iyo digaagga qaangaarka ah ee ku beeri doona Kuchinski?
Caleemo kale oo lagu daray - oo aan qabyo ahayn cuntada. Sidaa darteed, digaagga bilaabaan inay ku quudiyaan ukunta la kariyey, iyo sidoo kale caano dhanaan. Waqti ka dib, cagaarka yar yar ee la jarjaray, siriyalka qamadiga, khudradda kala duwan (baradhada, xididdo, karootada), iyo xitaa khamiir waxaa lagu daraa ukunta.
Digaagga qaangaarka ah, ayaa loo baahan yahay in loo sameeyo si aad u fiican, maaddaama aan dooneyno inaan helno culeysyo badan iyo faaqidaad. Sidaa darteed, hubi inaad ku quudiso shimbirahaaga:
Khudaarta iyo khudaarta cagaaran;
Kala kalluunka kalluunka iyo dhirta;
Waxaa sidoo kale xiiso leh in laga akhriyo diyaarinta quudinta
Haysashada digaagga: xaaladahee waa in loo tixgeliyaa khasab?
Guriga digaagga ee loogu talagalay noocaan waa inuu noqdaa mid ballaadhan oo leh tiro badan oo ah meelo lagu fadhiisto iyo kuraasta kuraasta. Dabaqa ugu wanaagsan wuxuu ku daboolaa caws, laakiin waa inaad hubisaa in ay mar walba qalalan tahay.
Sidoo kale, ma jirto in hawada loo oggolaado in ay istaagto qolka shimbiraha lagu hayo. Marka la eego nidaamka hawo ayaa loo baahan yahay.
Qolka gudaha waa in uu la yimaadaa sanduuqyo leh cunto iyo quraarado. Sidoo kale muhiim sii biyo si digaaggaSi kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in aysan ku dhicin guriga oo dhan oo aan barafoobin xilliga qaboobaha.
Tani waa mid aad u muhiim ah in la siiyo badeecooyin ballaaran oo socod ah, halkaas oo ay yeelan doonaan fursad ay iskood u heli lahaayeen cuntadooda. Gaar ahaan, waa muhiim inaad siiso cawska cagaaran iyo raadinta cayayaanka kala duwan ee ciidda.
Sidoo kale, ha ilaawin in qulqulka ciidadu yahay shaqo jecel digaagga, taas oo ay ugu mahadcelinayaan iyaga oo ka takhalusaya dulin.
Caan ah oo la mid ah curia gobolka Kuchinsky
Haddii habka ugu muhiimsan ee loo doorto digaagga digaagga loogu talagalay taranka sii kordhaya waa tayada iyo tirada hilibka, iyo sidoo kale awoodda ay u leeyihiin in ay ukumo ukumaha, ka dibna waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa noocyada kale ee xiiso leh.
Kuwani waa digaagga Poltava iyo salmon Zagorsky. Waxay sidoo kale ku farxi doonaan dhalidda sare oo waxaad si dhab ah uga mahad celinaysaa tayada hilibka sida wanaagsan ee ka mid ah taranka la tilmaamay.